अञ्जली अधिकारीले लकडाउनमा नै आँफु भन्दा कान्छा प्रेमीलाई भेट्न जाँदा के भयो यस्तो ? – Gazabkonews
अञ्जली अधिकारीले लकडाउनमा नै आँफु भन्दा कान्छा प्रेमीलाई भेट्न जाँदा के भयो यस्तो ?
अञ्जली अधिकारीले लकडाउनमा नै आँफु भन्दा कान्छा प्रेमीलाई भेट्न जाँदा के भयो यस्तो ? उनका बाबु नै पुगेपछि अञ्जली अप्ठ्यारोमा परिन्, आखिर के गरिन् अञ्जलीले यस्तो ?
पुनर्बीमा ब्रोकर सम्बन्धी निर्देशिका जारी, पुनर्बीमा ब्रोकरले के के गर्छ ? : बीमा समितिले पुनर्बीमा दलाल (ब्रोकर) सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गरेको छ । समितिले पुनर्बीमा दलालको पूँजी निर्धारण गरी दर्ता तथा नियमनको व्यवस्था मिलाई पुनर्बीमा बजारको विकास गर्न आवश्यक रहेकोले बीमा ऐन २०४९ अनुसार निर्देशिका जारी गरेको हो ।
निर्देशिका अनुसार पुनर्बीमा दलालको अधिकृत पूँजी न्युनतम १० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । पूँजी मध्येबाट अधिकृत पूँजीको २५ प्रतिशत रकम बीमा समितिबाट एअर मार्क गराई वाणिज्य बैंकको मुद्धती खातामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।त्यस्तै अधिकृत पूँजी तथा चुक्ता पूँजी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समितिले समय समयमा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
पुनर्बीमा ब्रोकरले के के काम गर्न पाउछ ? निर्देशिक अनुसार पुनर्बीमा ब्रोकरले बीमकले जारी गरेको बीमालेख अन्तर्गत उत्पन्न हुने दायित्व सम्बन्धमा बीमक (पुनर्बीमित) को तर्फबाट पुनर्बीमक तथा पुनर्बीमकको तर्फबाट अर्को पुनर्बीमकसंग मध्यस्थता गर्ने, पुनर्बीमा विशेषज्ञता सेवा र प्राविधिक परामर्श दिने, बीमा÷ पुनर्बीमा बजारको तथ्यांक विश्लेषण गरी पुनर्बीमित र पुनर्बीमकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
यस्तै पुनर्बीमा दाबी भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने, पुनर्बीमा सम्झौता तयार गर्न सहयोग गर्ने, पुनर्बीमा सम्झौता अनुरुपको लिने÷दिने रकमको हिसाब फरफारक गर्न सहयोग गर्ने लगायतको काम गर्नेछ । पुनर्बीमा दलाल (ब्रोकर) सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ काे पुर्ण पाठ यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सकिन्छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्न थाले पनि जीवन बीमा कम्पनीहरूको लाभांश भने अझै आउने छाँटकाँट देखिएको छैन् । जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई एनएफआरएस प्रणाली अनुसार समयमै वित्तीय विवरण तयार पार्न पार्न नसक्दा लाभांश आउन ढिलाई भैरहेको छ ।परम्परागत विधिबाट वित्तीय विवरण तयार पार्दै आइरहेका जीवन कम्पनीहरूलाई बीमा समितिले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि अनिवार्य रूपमा एनएफआरएस प्रणाली लागू गर्दै सोही अनुरूप वित्तीय विवरण तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई एनएफआरएस प्रणाली अनुसार वित्तीय विरण तयार पार्न निर्देशन दिएपछि हरेक वर्ष लाभांश प्रस्ताब गरेर साधारण सभा बोलाउन पनि ढिलाई हुदै आइरहेको छ । एनएफआरएस प्रणाली अनुसार वित्तीय विरण तयार पार्ने दक्ष जनशक्ति (एक्चुअरी) नेपालमा नभएपछि साधारण सभा बोलाउन समेत ढिलाई हुने गरेको हो ।